साधारण अभ्यासबाट असाधारण स्वास्थ्य लाभ  HamroKatha
साधारण अभ्यासबाट असाधारण स्वास्थ्य लाभ
राम्रो बानी, राम्रो जीवनशैली
हाम्रो कथा २०७५ फागुन १५ गते १४:०७
स्वास्थ्य र धन समान हुन् । यी दुवैको महत्व तब सम्म हामी बुझ्दैनौ जब सम्म यी दुबैलाई हामी गुमाउँदैनौ । जब स्वास्थ्य सम्बन्धी ठुलो समस्या आउँछ तब मात्र महसुस हुन्छ ‘अब स्वस्थ्यमा ध्यान दिनु पर्छ’ । तर बिरामी हुनु अघि नै थोरै ध्यान स्वास्थ्यलाई दिन सके बिरामी हुने समस्याबाट बच्न सकिन्छ । पुरै दिन तपाईँ जति समय मोबाइलमा खर्चिनु हुन्छ । त्यसको आधा समय आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनमा लगाउन थाल्नुहोस्; तपाईको जीवन कति परिवर्तन हुन्छ तपाईँ अनुमान नै लगाउन सक्नुहुन्न ।
स्वस्थ रहनका के गर्ने त ? निम्न साधारण अभ्यासबाट असाधारण स्वास्थ्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ ।
१) बायाँ फर्केर सुत्ने गर्नुहोस्
हाम्रो पेटको संरचना अनुसार दायाँ फर्केर सुत्द्दा पेट सम्बन्धी अनेक समस्या आउन सक्छ । जस्तो कि, रगत सर्कुलेसनमा समस्या, हर्ट बर्न लगायत समस्या ! यस कारण बायाँ फर्केर सुत्ने बानी गर्नुहोस् ।
२) समय-समयमा पानी पिईरहने
आजको व्यस्त जीवन शैलीका कारण हामी यति थोरै पानी पिउँछौ कि; जुन हाम्रो शरीरका निम्ति पर्याप्त छैन । जसले गर्दा हामी अनेकौँ स्वास्थ्य समस्याको सिकार हुन् पुग्छौं । यदि समय मिलाएर पर्याप्त पानी पिउनाले मात्र पचास प्रतिशत भन्दा धेरै शारीरिक समस्याबाट हामी मुक्त हुन सक्छौ ।
३) दैनिक केही समय हिँड्ने
दैनिक तपाईँ कति हिड्नु हुन्छ ? डब्लू एच ओ को सिफारिस अनुसार स्वास्थ्य रहनका निम्ति प्रत्येक दिन आठ हजार पाइला हिँड्नु आवश्यक छ ।
४) खानालाई ३२ पल्ट चपाएर खानुहोस्
आयुर्वेदका अनुसार हाम्रा प्रत्येक शारीरिक समस्या पेटका कारणले हुने गर्दछ । यदि हामीले हाम्रो पेट सफा राख्न सकेको खण्डमा हाम्रा शारीरिक समस्यामा कमि आउँछ । यसको लागी हामीले जङ्ग फुड खान कम गर्नुको साथै हाम्रो पाचन प्रक्रिया ठिक गर्नु जरुरी रहन्छ । त्यसका निम्ति हरेक प्रकारका खानालाई ३२ पल्टसम्म चपाएर खानले राम्रो सँग खाना पच्ने र पेट सम्बन्धी कुनै समस्या नआउने हुन्छ ।
५) स्वाथ्य वातावरण सृजना गर्नुहोस्
तपाईँ यस्तो सर्कलमा रहने बानी बस्नुहोसकि जहाँ स्वस्थीय पर्ती हर समय सचेत रहन सक्नुहोस् । दैनिक आफ्नो धेरै समय बिताउने साथी छनोटमा पनि बिचार पुर्याउनुहोस् । त्यस्ता साथी छनोट गर्नुहोस् जो स्वास्थ्य प्रति थोरै भए पनि सचेत रहुन ।
प्रस्तुती: ईश्वर लुईटेल
बिजनेस लिडरको हातमा किताब !
१५ मिनेट अगाडि ५८ सेकेन्डमा पढिने
लिच्छिवी काल देखी चलिआएको नेपालको एक मात्र उद्यम
२ घन्टा अगाडि १ मिनेटमा पढिने
आफु र अरु बीचको सन्तुलन !
अब अनलाइनबाटै सवारी टिकट : ओके जर्नी
कपडा भर्सेस डिसपोजेबल सेनेटरी प्याड
किताब ‘द पर्सनल एमबिए’को सारांश
आफ्नै जीवनमा पानीको अभावले गर्दा, ‘बेस्ट पानी’ सुरु गरें : गोकुल दंगाल
नेपाली बजारको लेजिड स्याण्डल !